अल्लू अर्जुनको फिल्मले तोड्यो ‘बाहुबली’ को रेकर्ड, राख्यो नयाँ रेकर्ड ! « Etajakhabar
अल्लू अर्जुनको फिल्मले तोड्यो ‘बाहुबली’ को रेकर्ड, राख्यो नयाँ रेकर्ड !
प्रकाशित मिति : २९ पुष २०७६, मंगलवार १२:०६
साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन र पूजा हेगडेको फिल्म ‘आल्हा वैकुण्ठप्रेमुलु’ शनिवारबाट प्रदर्शनमा आइसकेको छ । यो फिल्म दर्शकलाई निकै मन परेको छ । साथै, फिल्मले ‘बाहुबली’ को रेकर्ड समेत तोडेको छ । यो फिल्म सबैभन्दा ठूलो इन्डियन ओपनर बनेको भारतीय मिडियाले बताएका छन् । फिल्मले घरेलू बजारसँगै अमेरिकालगायतका देशमा पनि ठूलो कमाई गरेको छ ।
यो पारिवारिक फिल्मले संयुक्त राज्य अमेरिकामा ‘बाहुबली’ को रेकर्ड तोडेर नयाँ रेकर्ड बनाएको छ । ट्रेड एनालिस्ट रमेश बालाका अनुसार, फिल्मको प्रिमियरको ६० हजारभन्दा धेरै टिकट विक्री भएको छ । त्रिविक्रम श्रीनिवास निर्देशित फिल्म अल्लूसँगै तब्बू, सुशान्त, नवदीप, निवेथा पेथुराज, राजेन्द्र प्रसाद, वेनेला किशोर, सत्यराजलगायतका कलाकारहरुको अभिनय छ ।
बलिउड लाइफ डटकममा हालै कुराकानी गर्दै अभिनेता अल्लू अर्जुनले बलिउडमा काम गर्ने विषयमा भनेका छन्, ‘मलाई हिन्दी फिल्ममा काम गर्न मन छ । मलाई बलिउड फिल्म निकै मन पर्छ । मलाई लाग्छ कि कोही पनि दक्षिण भारतीय अभिनेतालाई बलिउडमा काम गर्ने इच्छा छ । किनकि, बलिउड निकै ठूलो उद्योग हो । यहाँ जो पनि आफ्नो करिअर बनाउन सक्छ ।’
‘आल्हा वैकुण्ठप्रेमुलु’ मा पूजा हेगडेले सफ्टवेयर कम्पनीको सिइओको भूमिका निभाएकी छन् । त्यस्तै, बलिउड अभिनेत्री तब्बू यो फिल्मबाट वर्षौपछि टलिउडमा फर्किएकी हुन् । उनले फिल्ममा अल्लू अर्जुनकी आमाको भूमिका निभाएकी छन् । १० वर्षपछि उनले तेलुगू फिल्म गरेकी हुन् । यो फिल्मले पहिलो दिन घरेलू बक्सअफिसमा ५५ करोडको व्यापार गरेको बताइएको छ ।